Nahoana no miadana be ny Mac-ko? Vahaolana | iPhone News
Nahoana no miadana be ny Mac-ko? vahaolana
Ignatius Room | | Mac
Raha ny antsika Tena miadana ny Mac, mila mandrakizay ny fanombohana, ny fanokafana fampiharana, ny fidirana amin'ny Finder na ny fanatanterahana izay hetsika izay, a priori, dia tokony ho tsotra, manana olana isika, olana izay, soa ihany, manana vahaolana samihafa arakaraka ny solosaina tsirairay.
Ao amin'ny Actualidad iPhone dia namorona torolàlana feno izahay ny olana rehetra mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny Mac ary ny fomba hamahana azy ireo.
Samy hafa ny solosaina rehetra, ary mety tsy hitovy amin'ny ordinatera hafa ny antony mahatonga anao mihazakazaka miadana kokoa noho ny mahazatra. Na izany aza, maro amin'ireo vahaolana nasehonay anao ato amin'ity lahatsoratra ity Izy ireo dia manan-kery ho an'ny ekipa rehetra.
1 Ahena ny isan'ny fampiharana misokatra ho azy
2 Hamarino ny toerana fitahirizana
2.1 Ahoana ny fomba hanafahana toerana amin'ny Mac
3 Jereo hoe ohatrinona ny habaka rafitra anananao amin'ny Mac
4 Akatona ny fampiharana tsy ilainao
5 Avereno indray ny Mac
6 Havaozina ny macOS
Ahena ny isan'ny fampiharana misokatra ho azy
Betsaka ny fampiharana manana ny mania falifaly, mba, amin'ny teoria, mahazo tombony rehefa mihinana, ampidirina ho azy amin'ny lisitry ny dingana izay manomboka rehefa manomboka ny fitaovana.
Arakaraky ny hamaroan'ny fampiharana misokatra ho azy isaky ny manomboka ny solosintsika isika, ny fotoana izay mandalo mandra-pahavitan'ny ordinatera. mihalava.
Vao mainka niharatsy ny olana raha resaka kapila mafy, satria, araka ny fantatsika rehetra, dia manana hafainganam-pandehan'ny famakiana miadana kokoa noho ny SSD izy ireo.
Ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika mba hanafainganana ny fiasan'ny ekipantsika dia ny fijerena ny isan'ny fampiharana izay mandeha rehefa manomboka ny solosaina, manao ny dingana aseho eto ambany:
Miditra izahay ‎System Preferences‎ - Mpampiasa sy vondrona.
Avy eo, misafidy ny tabilao ‎ isika‎Ízavatra session.‎
Avy eo, safidio ny programa tianao esorina amin'ny lisitry ny entana fanombohana ary tsindrio ny marika minus eo ambanin'ny lisitra.
Hamarino ny toerana fitahirizana
Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fampandehanana miadana na amin'ny Mac sy amin'ny rafitra fiasa hafa toa ny Windows, iOS na Android dia tsy fahampian'ny toerana fitahirizana.
Ny rafitra rehetra miasa mila toerana malalaka kely indrindra, habaka izay matetika ampiasaina ho fitadidiana virtoaly rehefa feno ny RAM raha tsy manidy ho azy ireo fampiharana misokatra ny solosaina mba hanafaka ny fitadidiana.
Ny habaka ambany indrindra atolotra ho an'ny Mac mba hiasa mora foana, na inona na inona karazana fitahirizana (HDD na SSD) izany dia 10 na 15%.
Mba hanafaka toerana amin'ny kapila mafy, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia mifindra any amin'ny kapila mafy ivelany ny votoaty rehetra izay tsy ampiasainay na tsy ilaintsika miverimberina ao amin'ny ordinaterantsika (sarimihetsika, horonan-tsary, sary, fampiharana...)
Raha mampiasa solosaina finday ianao ary maniry foana tehirizo tsara io votoaty io, ny safidy tsara indrindra dia ny manakarama sehatra fitahirizana rahona. iCloud no safidy tsara indrindra amin'ny Mac noho ny fampidirana ny sehatra amin'ny rafitra manontolo.
Raha tsy resy lahatra amin'ny drafitra fitahirizana Apple ianao dia afaka mampiasa sehatra hafa toy ny OneDrive, Google Drive, Dropbox... mampiasa ny fampiharana ho an'ny Mac izay ampifandraisina ho azy ny atiny vaovao sy voaova.
Ireo fampiharana rehetra ireo dia miasa amin'ny fangatahana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny rakitra dia tsy voatahiry ao amin'ny solosainay, afa-tsy misy hitsin-dàlana mankany amin'ny rakitra aseho.
Rehefa manindry io rakitra io mba hanokafana azy dia mandeha ho azy dia alaina ao amin'ny solosainay. Rehefa vita ny fanitsiana, dia halefa any amin'ny rahona indray izany mba ho azo idirana amin'ny fitaovana hafa.
Raha, rehefa avy namindra ny votoaty tsy ilaina rehetra amin'ny kapila mafy ivelany, mankany amin'ny rahona, mankany amin'ny NAS... tsy afaka manafaka toerana bebe kokoa ianao satria mila ny fampiharana tsirairay napetrakao ianao, tokony hieritreritra momba ny fanovana ny kapila mafy ianao, fa tsy alohan'ny hanamarinana ny halaviran'ny rafitra amin'ny Mac-nao.
Jereo hoe ohatrinona ny habaka rafitra anananao amin'ny Mac
Ny fitantanana izay ataon'ny macOS amin'ny angon-drakitra momba ny rindranasa syTena hafa noho ny ataon'ny Windows izany.
Raha mamela antsika hisafidy ny toerana hitehirizana ny angon-drakitra alaina ny fampiharana ny Windows, macOS mandeha ho azy ny lalana ary mahita azy ho toy ny habaka ipetrahan'ny rafitra.
Rehefa mamafa fampiharana isika dia mamafa ilay fampiharana fotsiny, tsy ny angon-drakitra rehetra no alaina tamin'ny alalan'io.
Ohatra: raha mamafa ny app Steam ianao dia ny app ihany no ho voafafa tsy ny kilalao rehetra no alainao teo aloha.
Raha te hahafantatra hoe ohatrinona ny habaka misy ny rafitra ao amin'ny Mac, tsindrio eo Momba ity Mac ity - fitehirizana.
Ny loko mavo dia maneho ny habaka rehetra ipetrahan'ny rafitra. raha ity mihoatra ny 20 GB toy ny, tokony handinika ny fanamarinana isika raha mijery angon-drakitra avy amin'ny fampiharana hafa ny macOS ho ampahany amin'izany.
Inventory kapila X
Mba hanamarinana izany, dia afaka mampiasa ny fampiharana maimaim-poana Disk Inventory na ny fandoavana daisydisk.
Ireo fampiharana roa ireo dia hamakafaka ny vondrona fitahirizanay ary hampiseho anay ny habaka ipetrahan'ny lahatahiry tsirairay ao amin'ny ekipanay.
Amin'ny fipihana ny lahatahiry tsirairay dia afaka miditra amin'ny rakitra rehetra voatahiry izahay miaraka amin'ny toerana misy azy ireo. Izany dia mamela antsika hanamarina raha tena mila azy ireo isika na raha toa ka rakitra fampiharana nofafanay hatry ny ela izy ireo.
Raha eny, avy amin'ny fampiharana mihitsy afaka mamafa azy tsy misy olana isika.
Ny fampiharana Inventory kapila X dia azo alaina maimaim-poana tanteraka amin'ny alàlan'ny tranokalanyraha daisydisk, misy amin'ny alàlan'ny tranokalany, ary manolotra antsika dika andrana alohan'ny hividianana ny fahazoan-dàlana mifanaraka amin'izany.
Akatona ny fampiharana tsy ilainao
Raha tsy te hampiasa fampiharana ianao, akatona ny.
Ny hany azo atao amin'ny fitazonana fampiharana misokatra amin'ny solosainay dia mandany loharanon-karena izay azontsika atokana ho an'ireo fampiharana izay nosokafanay.
Fanindriana ny fitambarana fanalahidy Option + Commandd + Esc, hisokatra ny varavarankely vaovao mampiseho ny rindranasa rehetra nosokafanay tamin'io fotoana io.
Mba hanakatona ireo rindranasa izay tsy hampiasaintsika dia tsy maintsy misafidy izany amin'ny totozy isika ary tsindrio Fivoahana an-kery.
Avereno indray ny Mac
Avereno indray ny Mac, toy ny fitaovana hafa rehetra iray amin'ireo fomba amam-panao tokony horaisintsika. Rehefa mamerina fitaovana iray ianao dia miverina amin'ny rafitra fiasana apetraho amin'ny toerany ny zavatra rehetra.
Amin'izany fomba izany hovonoina ny dingana rehetra ao amin'ny fitadidiana amin'ny fitaovana izay mety mampiadana ny solosaina na misy fiantraikany amin'ny fampandehanana azy.
Havaozina ny macOS
Ny iraka fanavaozana ny rafitra fandidiana tsy vitan'ny hoe mampiditra asa vaovao. Ny ankamaroan'ny fanavaozana dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny fampisehoana ary indrindra indrindra, ny fiarovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Mac » Nahoana no miadana be ny Mac-ko? vahaolana
Ahoana ny fiasan'ny Universal Control, ny majika vaovao an'i Apple
Ny fampitahana tena izy dia mampiseho fa ny AirTag no tracker azo antoka indrindra